भाग्य को लाइन को व्याख्या: Palmistry
हरेक व्यक्ति कम्तिमा आफ्नो जीवनमा एक पटक आफ्नो भाग्य के हो, भविष्यमा को रहस्य unveil र सिक्न चाहन्थे अगाडि निहित के। मानिसहरूलाई ज्योतिष, Numerology र Palmistry बारी यी प्रश्नहरूको जवाफ। उत्तरार्द्ध एक व्यक्तिको चरित्र, विगतमा र भविष्यमा थाहा के तपाईंको हतियार, परिभाषित गर्ने क्षमता छ। विशेष महत्व छन् भाग्य रेखा। रेखाचित्र, मोटाइ र Palms यी सुविधाहरू लम्बाइमा Palmistry मानिसको भाग्य बारेमा जवाफ दिन्छ। हामीलाई विस्तार तिनीहरूलाई जाँचौं।
Fate रेखाहरूको: Palmistry
यी सुविधाहरू आफ्नो हात मा दोस्रो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चिन्ह हुन मानिन्छ। स्तर मा पहिलो - जीवनको रेखा। भाग्य लागि जिम्मेवार छ कि सुविधा, आफ्नो क्यारियर योजना बारे हरेक मानव जीवन, र आवश्यकता को विकास बारे बताउन सक्छ। यो पाम ठाडो को बीचमा स्थित र कलाई गर्न बीचमा औंला (Palmistry भनेअनुसार) बाट जान्छ छ। भाग्य रेखा अर्थ यो पनि सफलता र भाग्य रूपमा निर्धारण गरिन्छ। Ironically, हत्केलामा यो विशेषता सबै मान्छे को लागि उपस्थित हुन सक्छ। भने, त्यसपछि यो एक व्यक्ति कुनै छ भन्ने हो जीवनमा उद्देश्य, कुनै आकांक्षाओं। एउटै मामला मा, यस्तो व्यक्तिगत सपना र आवश्यकता छ भने, भाग्य को लाइनहरु को कमी छ कि यो विकास गर्दैन, कार्य छैन, आफ्नो इच्छा छैन जाने गर्छ अर्थ, र प्रदान लागि जीवन लिन्छ र केहि परिवर्तन गर्न चाहनुहुन्छ छैन।
Palmistry भन्छन् रूपमा हात मा भाग्य रेखा व्यक्ति अझै पनि पाता गर्दा देखा जीवनमा उद्देश्य र यसलाई प्राप्त गर्न प्रतिबद्ध छ। पनि यो लाइन, यसको मोटाइ, नमुना को प्रकृति को लम्बाइ एक मान छ। यो अब लाइन, राम्रो, अधिक ती गुणहरू भन्दा यो मान्छे दिन्छ थप उन्नत छन्। एउटै यसको मोटाई बारेमा भने गर्न सकिन्छ। लाइन discontinuous वा सानो ड्यासहरू संग डट छ भने, यो आफ्नो लक्ष्य मानिस बाटो मा धेरै अवरोध हुन सक्छ भन्ने हो।
सुविधाहरू भाग्य रेखा
मानव पाम यो सुविधा को विवरण Palmistry उनको हात मा अन्य चिह्न यसको स्थिति र अन्तरक्रिया गर्न पनि ध्यान दिन्छिन्। यो लाइन को शुरुवात मा व्यक्तिगत बच्चा मा देख्न सकिन्छ। यसैले, fateful लाइन जीवनको एक ड्यास जोडिएको यदि छ, यो एक व्यक्ति थियो भन्ने हो र परिवारको बलियो प्रभाव छ। यो हात मा भने चिह्नों देखि एक धेरै दूरी मा लाइन को भाग्य छ भने, हामी आफ्नो जीवनको धेरै सुरुदेखि एक व्यक्ति कुनै एक परामर्श संग, आफैलाई सबै निर्णय गर्न भनेर भन्न सकिन्छ। आमाबाबुले संग यस्तो व्यक्ति बरु चिसो मनोवृत्ति।
भाग्य रेखा को अन्त गतिविधि कुनै पनि प्रकार गर्न एक व्यक्ति को झुकाव संकेत हुन सक्छ। लाइन को अन्तर्गत समाप्त यदि सूचकांक औंला, एक पाम मालिक राजनीति, प्रशासन वा व्यवस्थामा सफलता अधीन गर्छ। हामी लाइन रुचि हो भने बीचमा औंला गर्न tends, त्यसपछि एक यस्तो नजिक यस्तो व्यापार, स्वास्थ्य, शिक्षा र अन्य पेशों रूपमा क्लासिक गतिविधिहरु गर्न व्यक्ति। रचनात्मक र Communicative मानिसहरू घन्टी औंला अर्को अन्त्य, भाग्य को एक नरक छ। यो भाग्य को लाइन को अन्त मा एक शाखा छ भने मानिस, एक अभूतपूर्व सफलता र ख्याति लागि प्रतीक्षा गर्दै। Palmistry यस्तो व्यक्तिगत वित्तीय राम्रो-हुँदा आनन्द र सफलता विशेषताहरू।
शुभकामना कसरी आकर्षित गर्न: सुझाव र चाल
Chihalka रात: लक्षण, संकेत ...
Guessing "म एक प्रतिद्वन्द्वी छ?": विवरण र ट्रान्सक्रिप्ट
त्यहाँ hypoallergenic बिरालो हो?
मृत्युको ब्लू स्क्रिनले अपरिचित प्रयोगकर्तालाई के गर्न सक्छ
रोजगारी र आफ्नो विवरण प्रकार। काम र पेशों को प्रकार
आफूलाई सानो सम्झने पांडा रातो। को मास्को चिडियाघर रातो पान्डा
Dumbbells बैठक को प्रेस: उपकरण
सबै भन्दा राम्रो कार, cabriolets: तस्बिर, ब्रान्डहरु र मूल्यहरू
Nikolay Vasilevich Zlobin: जीवनी, वैज्ञानिक गतिविधिहरु, पुस्तकहरू